ပါကစ္စတန်မှဒူနီယမ်သတင်းများသည်ကစားကွင်းလုပ်ငန်းကိုအဆင့်မြှင့်ရန် Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များကိုရွေးချယ် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ပါကစ္စတန်ရဲ့ Dunya သတင်းပလေးအောက်စစ်ဆင်ရေး Upgrade လုပ်ဖို့ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များကိုရွေးကောက်ပြီး
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များတစ်ဦးဦးဆောင်အလိုအလျောက်, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပေါင်းစပ်ရုပ်သံလိုင်းအထူးကု, ယနေ့ Dunya သတင်းများ, ပါကစ္စတန်ရဲ့ဉီးတီဗီချန်နယ်လ်တရှေးခယျြမူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ ယင်း၏ State-Of-The-Art ပလေးအောက်စက်ရုံအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
လာဟိုး, ပါကစ္စတန်အခြေစိုက်, Dunya သတင်းများပါကစ္စတန်လျှောက်လုံးပရိသတ်တွေ, United Kingdom, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် United States ကိုဒူအတွက်သတင်းနှင့်မျက်မှောက်ရေးရာ programming ကိုပေးပါသည်။
အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း State-Of-The-Art နည်းပညာကို အသုံးပြု. အပေါ်သူ့ဟာသူ prides ။ တစ်ရှည်လျားသောအချိန်အသုံးပြုသူ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ'' နီယမ်အလိုအလျောက်စနစ်, Dunya သတင်းများယခု Pebble ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ရှိ Marina အလိုအလျောက်နှင့်အတူ၎င်း၏ပလေးအောက်စစ်ဆင်ရေးအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ပျက်ကွက်မရှိတစ်ခုတည်းအချက်နှင့်အတူအပြည့်အဝမလိုအပ်တဲ့ဖြစ်ပြီး, စားသုံးမိပါ, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပလေးအောက်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလွှမ်းခြုံ။ အဆိုပါစနစ်သည်လက်ရှိ device ကိုအခြေခံအဆောက်အဦသို့ slot နှစ်ခုပေမယ့်ထုတ်လွှင့်ဖို့ပိုကောင်း workflow နှင့်အလိုအလျောက် tools တွေကိုပေးထားပါတယ်။
"အရာသတင်းနှင့်မျက်မှောက်ရေးရာအတွက်အစာရှောင်ဖြစ်ပျက်နှင့်ပြောင်းလဲမှုအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်, ငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအလုပ်ကယ်မလွှတ်နိုင်သူအတွေ့အကြုံရနည်းပညာမိတ်ဖက်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့အဆင့်မြှင့်အဘို့ထိုသူတို့သှားဖို့အတှကျအ Pebble နှင့်၎င်း၏ Neptune အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်၏ 10 နှစ်ကြာပြီးနောက်ကြောင့်အသိကိုဖန်ဆင်း, "Zubair Rasheed, နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးနှင့် Dunya Media Group ၏ဦးခေါင်းအတည်ပြုဖို့ကပြောပါတယ်
"Marina ရွေးချယ်ခြင်းများတွင် Dunya က၎င်း၏စားသုံးမိပါ, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက် Workflows များအတွက်အနာဂတ်-အထောက်အထားဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်, ကျနော်တို့ကသူတို့စစ်ဆင်ရေးမှနိမ့်ဆုံးပြတ်တောက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Neptune ဖြေရှင်းချက်ကနေရွှေ့ပြောင်းပြီးစီးခဲ့ပြီဂုဏ်ယူနေကြတယ်" ဟု Samir Isbaih ၏ VP commented အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ပွေးမှာအဘို့အရောင်း Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ.
က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-01-31
ယခင်: နယူး CaptionMaker စာတန်းထိုးဆော့ဝဲ 100 ဘာသာစကားများနှင့်အော်တိုကူးယူမှတ်တမ်းတင်ကျော်ထောက်ပံ့
နောက်တစ်ခု: Facilis နည်းပညာ NAB 2019 မှာနယူးကုန်ပစ္စည်းများမိတ်ဆက်ဖို့